Wariye Yoonis Cali Nuur oo geeriyooday - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Wariye Yoonis Cali Nuur oo geeriyooday
Wariye Yoonis Cali Nuur oo geeriyooday
July 20, 2018 admin782
Allaha u naxariistee waxaa xalay Isbitaal ku yaalla magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday Wariye Yonis Cali Nuur oo mudo ku dhaw 30 sano ka tirsanaan jiray laanta af-Soomaaliga ee BBC-da.
Wariye Yoonis ayaa mudooyinkii dambe wuxuu la taliye u ahaa Wasiirka Warfaafinta maamulka Somaliland, magaalada Hargeysa, iyada oo bil kahor uu caafimaad u aaday magaalada London, halkaasi oo ugu dambeyn uu xalay ku geeriyooday.
Qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa waxa ay inoo sheegeen in mudooyinkii dambe uu xanuunsanayay, laba jeerna uu isbitaal ku galay magaalada Hargeysa, kahor inta aanu aadin magaalada London.
Marxuumka geeriyooday ayaa shaqada saxaafadda waxa uu ka bilaabay Radio Muqdisho, waxayna isla soo shaqeeyeen oo ay isku waqti ahaayeen Rug cadaayaal saxaafadeed oo ay ka mid ahaayeen Wariye Cowke iyo Wariye Maxamed (Teera).
Wasiirka Warfaafinta Somaliland oo la taliye uu u ahaa Wariye Yoonis ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Marxuumka, wuxuuna tacsi u diray xaasaskiisa, caruurtiisa iyo dhammaan eheladii uu ka geeriyooday.
Mareykanka oo liiska Argaggixisada ku daray koox cusub oo ka hawlgasha Somalia
March 17, 2019 Cali Yare